UKUKHETHA UBUNGAKANANI BEBHEDI (UKUMKANI, UKUMKANIKAZI, UBUNGAKANANI BEBHEDI KUNYE NAMAWELE ONKE) - UYILO LWEGUMBI LOKULALA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokulala Ukukhetha Ubungakanani beBhedi (uKumkani, uKumkanikazi, Ubungakanani beBhedi kunye namawele onke)
Ukukhetha Ubungakanani beBhedi (uKumkani, uKumkanikazi, Ubungakanani beBhedi kunye namawele onke)
Ukukhetha ubungakanani beebhedi ezichanekileyo kwimeko yakho sisigqibo esibalulekileyo esinokuthi senze intuthuzelo kunye nomgangatho wokulala. Ukuthenga umatrasi kunokuba ngumsebenzi owoyikisayo kodwa ukwazi into oyifunayo ngaphambi kokuba uhambe kwenza umahluko omkhulu. Ukwazi ubungakanani beebhedi ezahlukeneyo ezikhona kunye nendlela ezinokungena ngayo kwisithuba sakho kuya kwenza ukuba ukuthenga kube lula, kube lula, kwaye kungakhathazi kangako. Apha ngezantsi siza kugubungela ezona bhedi zidumileyo kunye nokubonelela ngeengcebiso zokuyila ngaphakathi ukukunceda ukhethe obona bungakanani bomatrasi.
Nantsi imilinganiselo efanelekileyo yokugcina engqondweni, ungasebenzisa le milinganiselo kunye neepeyinti ezithile zokupeyinta ezingayi konakalisa umgangatho wakho ukwenza ulwandlalo olukhawulezileyo lwebhedi ukuze ufumane umbono wokuba lingakanani igumbi eliza kuthatha indawo yakho isithuba. Gcina ukhumbula ukuba obu bubungakanani bakho bematrasi, isakhelo sebhedi osikhethileyo sinokongeza ubude nobubanzi obongezelelweyo. Ngoncedo olongezelelekileyo ekukhetheni ubungakanani beebhedi jonga kwisikhokelo sethu se Uyilo lwegumbi lokulala ukulungiselela igumbi ngokulula. Ukongeza sinegalari ebonisa ezithandwa kakhulu iintlobo zeebhedi iyafumaneka.
isini eblowu kunye nezihlangu zedolophu
Ubungakanani beBhedi ngokulandelelana
Ubukhulu beKing Ubukhulu beBhedi
Ubukhulu beKing Bed yaseCalifornia
Indawo yokulala yaseKing Texas
Ubungakanani beBhedi enkulu
Ubukhulu boKumkanikazi Ubungakanani beBhedi
Ingakanani iBhedi yoKumkani enkulu kunoKumkanikazi
Ubukhulu beBhedi epheleleyo
Ubungakanani beBhedi yamawele
I-Twin VS Ibhedi ephindwe kabini
Nalu ulwahlulo lobungakanani beebhedi ngokobungakanani bazo:
Ubukhulu bokulala kweKing Ubukhulu: ii-intshi ezingama-76 nge-80 intshi
Ubungakanani beBhedi yaseCalifornia Ubukhulu beBhedi: ii-intshi ezingama-72 nge-intshi ezingama-84
I-Texas okanye i-Athletic King Ubukhulu beBhedi yokulinganisa: ii-intshi ezingama-80 nge-98 intshi
Ubukhulu beBlask yobukhulu beBhedi yokulinganisa: ii-intshi ezingama-108 nge-108 intshi okanye i-9 yeenyawo ngeenyawo ezili-9
Ubukhulu beKumkanikazi Ubukhulu beBhedi: ii-intshi ezingama-60 nge-intshi ezingama-80
Ubungakanani obupheleleyo beBhedi yokulinganisa: ii-intshi ezingama-54 nge-intshi ezingama-75
Ubungakanani bamawele amabini Ubukhulu beBhedi: ii-intshi ezingama-38 nge-75 intshi
Ubukhulu beBhedi ye-XL yokulala: ii-intshi ezingama-39 nge-intshi ezingama-80
Ibhedi yephaneli efakwe ifolokhwe efakwe ngombala oluhlaza- Imvelaphi
Iibhedi ezikumgangatho osezantsi e-United States nase-Canada zingama-76in ngo-80in, ezilinganiswe nge-cm, umatrasi ongange-193cm nge-203cm. Ukuba umatrasi wakho ufuna imithombo yebhokisi, unokusebenzisa enye intwasahlobo yebhokisi yasentwasahlobo okanye imithombo emibini yeebhokisi zeebhokisi ze-xl, ukulungiselela ukuthwala. Umbhede wokumkani unokulingana kwigumbi lakho elingenanto, kodwa xa uthe wongeza itafile esecaleni kwebhedi okanye ezimbini, isinxibo kunye nezinye iimpahla, loo bhedi yokumkani inokuba nkulu kakhulu. Khumbula xa ukhetha ubungakanani beebhedi ukuze uqwalasele imilinganiselo yayo yonke impahla yakho xa usenza isigqibo sokuba umatrasi kunye nesakhelo sebhedi siyakulingana na kwisithuba.
Iibhedi zaseKhalifoniya zingama-72in nge-84in okanye i-183cm ngo-213cm, nto leyo ibenza banciphe kwaye bade kunenkosi esemgangathweni. Khumbula, ezinye iisayizi zebhedi kunzima ukufumana iilinen zebhedi, jonga iilinen ebhedini kwisayizi nganye ukuqinisekisa ukuba unokufumana ngokulula iilinen ezinokulingana ibhedi, isitayile sakho, kunye nohlahlo-lwabiwo mali ngaphambi kokwenza utyalomali kumatrasi wakho.
ezona ndawo zokuthandana zabafazi
Amakhaya amaninzi asandul 'ukwakhiwa kwezi ntsuku anee-suites eziphambili ezivakala ngathi zii-cavern, ibhedi enkulu yindlela entle yokugcwalisa loo ndawo kwaye iyenze ifane nekhaya kunegumbi le-echo. Ufuna ukushiya malunga ne-2 'yendawo ejikeleze amacala kunye neenyawo zebhedi yakho ukuze ube negumbi elaneleyo lokuhamba malunga nendawo. Ukuba unegumbi elincinci kodwa usafuna ibhedi enkulu, uKing California kufanelekile ukuba ujonge kuyo.
Ngaba yonke into inkulu kakhulu eTexas? Andiqinisekanga ncam, kodwa ibhedi yobukhulu benkosi yaseTexas, ekwabizwa ngokuba yi-Athletic King, ingama-80in nge-98in okanye i-203cm nge-249cm, ngokuqinisekileyo iyayenza loo ngxelo inyaniseke. Ngaba ibhedi okanye i-trampoline? Nokuba uyayisebenzisela ukwenza i-gymnastics okanye ukulala, kungafuneka ufumane isakhelo esenzelwe eli rhamncwa, cwangcisa ngokufanelekileyo ukuba ujonge ukuya eTexas enkulu.
Ubukhulu beebhedi obukhulu yiNkosi yaseAlaska, elinganisa i-9ft nge-9ft, okanye i-108in ngo-108in. Udinga ibhokisi eneentonga ezintathu ukuze uhambe nale bhedi ilingane negumbi. Ungalala ngesabelo kunye nomntwana omncinci ongaze unyawo emqolo ngo-3 kusasa ngombhede obu bukhulu! Ewe kunjalo, inzima kwaye inzima ukutsiba nokucoca umatrasi wakho kuya kufuna iqela labahlobo abomeleleyo. Ndiqinisekile ukuba ngekhe bakukhathalele ukuba nje ungabavumela iNetflix kwaye bapholise ipitsa ngeziselo ezimbalwa emva koko. Le yeyona bhedi iphela yoyi yokulala!
Ibhedi yeplatform eneeslats kumbala we-taupe- Imvelaphi
Ungathini xa ukhetha izinto kancinane… ngobumkanikazi? Ubungakanani beebhedi zokumkanikazi ngama-60in ngo-80in okanye ngo-152cm ngo-203cm. Umatrasi okumkanikazi okwangoku ngoyena matrasi uthandwayo kwaye ubonelela ngendawo eyoneleyo yegumbi labantu kunye nenani elamkelekileyo legumbi lezibini.
Izimvo zomtshato wasebusika ezimangalisayo kuhlahlo-lwabiwo mali
Olunye uguquko kumbhede omkhulu ukumkanikazi ziimodeli zeOlimpiki kunye neCalifornia Queen. Ibhedi lokumkanikazi iOlimpiki lilinganisa i-66 ″ nge-80 ″, ngelixa ibhedi enkulu yaseCalifornia ilinganisa i-60 ″ nge-84 ″. Ezi ntlobo zimbini zibonelela ngobude obongezelelekileyo kububanzi okanye kubude kwabo bafuna indawo ethe kratya.
Ungazibuza ukuba, kuhle kangakanani ukuba ibhedi yokumkani ingukumkanikazi? Ukumkani ubanzi nge-16in ububanzi ngaphezu kwendlovukazi kodwa bobabini bangama-80in ubude, bebenza balingane. Ithetha ukuthini le nto, ngokuchanekileyo? Abantu ababini abalele ebhedini ebukhulu benkosi baya kuba nendawo malunga newele.
Kwindlovukazi, nganye inesayizi encinci encinci yokulala. Kuxhomekeke ngokupheleleyo kubukhulu begumbi lakho kunye nokukhetha kwakho ukulala, ukuba uyathanda ukolula kancinci kwaye iqabane lakho alisixabisi isandla sakho ebusweni babo ubusuku bonke, ukuba i-intshi ezili-16 zingenza impembelelo enkulu kumgangatho wobudlelwane bakho kunye namava okulala. Ewe kunjalo, ukuba uluhlobo lobuqhetseba, ibhedi yokumkanikazi inokutywina isivumelwano malunga nazo zonke iintlobo zothando olusondeleyo.
Ubungakanani obupheleleyo bebhedi emhlophe eqweqwe yebhedi- Imvelaphi
unxibe ntoni emtshatweni wango-5pm
Ukuba uyisibini esikuthanda ngokwenene ukukhukhumala kwaye ungakhathali ngengalo zakho ziba ndindisholo phantsi kobunzima bomnye umntu, ibhedi ebukhulu bupheleleyo ngumhlobo wakho. Ubungakanani beebhedi ezipheleleyo zii-54in nge-75in okanye i-137cm nge-191cm.
Abanye banokuthi ibhedi egcweleyo ilungile kwigumbi leendwendwe. Umgangatho olungileyo, ukhululeke ngokupheleleyo umatrasi ogcweleyo uxelela abantu basebukhweni bakho ukuba uyakhathala, kodwa ukwabelana ngendawo encinci akuyi kubashiya belingeka ukuba bandise ukuhlala kwabo. Yithathe kwingcali kubugcisa obuhle bokubuka iindwendwe emazantsi, ubabulale ngobubele kwaye ugcine impilo yakho kwangaxeshanye, wenze abantu bakhululeke ekhayeni lakho kodwa banganeli ukuba bangene!
Ukuba ungumntu ongatshatanga oneminyaka engama-30 ubudala kwaye ukulungele ukugqiba kwibhedi yakho yasekolishi engamawele kodwa ungenayo indlu enkulu, ibhedi egcweleyo yinto entle.
Iphaneli yebhedi yamaVictor yobukhulu beebhedi- Imvelaphi
Kwaye ngoku sifika kubukhulu beebhedi ezingamawele. Ubukhulu bewele lamawele ngama-38in ngo-75in okanye ngo-97cm ngo-191cm. Amagama amabini ibhedi kunye nebhedi enye inokusetyenziswa ngokungafaniyo. Ukuba awunguye umntwana okanye umncinci kwicala elide, iwele i-XL, elinganisa i-39in ngo-80in ilungile kuwe.
Ikhitshi le-arabesque backsplash
Iwele i-XL liyaziwa, kwaye mhlawumbi lide lithandwe, ngabantwana abaninzi beekholeji abahlala kwikholeji. Ibhedi yamawele ilungile kuba icwecwe ngokwaneleyo ukuba ime nkqo, njengakwiibhedi zebhedi, ukugcina indawo yomgangatho kunye nokudala ibhedi ephezulu enqwenelekayo nokuba yeyiphi na inkwenkwe ephumelela iphepha, isikere, iliwa.
Kunokubakho ukudideka xa kufikwa ekwazini umahluko phakathi kwebhedi yamawele kunye nokulala kabini. Ukucoca oku kuthathelwa ingqalelo ukuba iwele lincinci ngebhedi epheleleyo ngobukhulu nge-15 ″ ububanzi kwaye linobude obulinganayo. Rhoqo ukugcina izinto zilula iwele kubhekiswa kulo njengelinye, ngelixa umandlalo ogcweleyo ubizwa ngokuba ngumbhede ophindwe kabini
Ngaphambi kokuthatha isigqibo sokuba uyayifuna okanye awuyifuni i-pillowtop okanye i-foam yememori, misela umandlalo ochanekileyo wesithuba sakho kunye neemfuno zakho. Khumbula ukushiya malunga neenyawo ezi-2 ujikeleze amacala amathathu ebhedi ukuvumela ukuhamba ngokukhululekileyo kwigumbi. Oko kuthethiweyo, zininzi iindlela zokumisela ukubekwa kwebhedi kwindawo, ezinye zazo ezaphula loo mthetho ngempumelelo, ke jonga indawo yakho.
Yenza umzobo wokukala kwaye usike iitemplate zeebhedi kunye nezinye izinto zeefenitshala kwaye uzihambise kumzobo. Kwakhona, sebenzisa itheyiphu yokupeyinta phantsi kubukhulu bebhedi oyifunayo kwaye uyijikeleze, uqiniseke ukuba unendawo eyoneleyo yokuhlala kamnandi. Akukho mntu ufuna ukubetha rhoqo i-shin yabo kwisakhelo sebhedi kuba indawo incinci kakhulu ukuba ungahamba kuyo.
Xa ukhetha ubungakanani beebhedi kuyahlawula ukukhumbula ukuba isakhelo sakho sebhedi siya kongeza kubungakanani kanye nakwindawo ebonakalayo ebhedini yakho oyithathayo. Ukuba nebhedi yesayizi yokumkani kwigumbi elincinci emva koko ukongeza kwi-oki eqinileyo ipowusta ebhedi epheleleyo nebhodi yentloko enkulu kunye nebhodi yeenyawo ziya kuziva zimnyama kunye ne-claustrophobic. Ngokukodwa ukuba unokongeza enye ifenitshala emnyama, enzima.
Isakhelo sebhedi yoKapteni ngombala omhlophe oqaqambileyo sinokuhlala umatrasi omncinci kwaye sinikeze ngokugcinwa okongezelelekileyo kwigumbi lokulala elinokwabelana ngendawo negumbi lobugcisa. Uyilo olukhulu lufuna ukuba siqwalasele kungekuphela nje indlela izinto ezijongeka ngayo, kodwa nendlela izinto ezilingana ngayo kwaye zisebenze kwindawo.
Ukuchonga ubungakanani beebhedi ezichanekileyo kukuqala koyilo olukhulu lokulala. Ukwazi ubungakanani bematrasi obudingayo ngaphambi kokuba uyokuthenga kuya kukugcinela ixesha elininzi kunye nokudakumba kuvulela indlela igumbi lokulala eliphumayo elijongeka ngathi lenziwe yinkqubo.
Uyilo lwegumbi lokulala elinamaGalari ongathanda:
Iingcamango zobume bokulala - Uyilo lwegumbi lokulala eliyintloko - Iingcamango zokulala zeFeng Shui
Ndikuthanda ngeentliziyo zam zonke
ugcina malini imihla yexabiso
unxibe iimpahla zontombi ezingaphantsi kwe-100
izipho zonyaka wokuqala zomyeni
U-steven yeun umfazi joana pak
izimvo zesipho somzalwana nodade wabo